बहाना ‘साईँली’ थियो, संयोग अनेक भैदियो - ConfuseNepal
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार कन्फ्युजनेपाल0Comments
अाईतबार बिहान १०:३० हुँदो हो, सौलको तोङदेमुन यात्रा सुरु भयो । म र एकजना साथी, जस्लाई सङबु यग बाट देरिम यग पुग्ने ट्रेन चढाईदिनु छ । अनि म सिधै तोङदेमुन यग को गेट नं ३ मा पुग्नु छ । फिल्म हल तोङदेमुन मै नभएपनि त्यहाँ दिपा नानी, पार्बती नाना लगायत साथीहरु हुनुन्छ । पार्बती नानासङग फोन गरिसकेकी छु । त्यसो त नेपालीहरुको लागि तोङदेमुन जक्सन यरिया हो । अझ गेट नं ३,,,, यो शीर्षकमा धेरैले कलम घुमाईसक्नुभएको छ तसर्थ थप बोल्न चाहिनँ । करिब २५ मिनेट पछि तोङदेमुन यग अाईपुग्यो ट्रेन, उसैको पाखुरा समातेर अाईपुगेँ म पनि । ११ बजिसकेको थियो होला, गेट नं २/३ पछ्याउँदै छिटोछिटो सिँढि उक्लिएँ । म अगाडि ३/४ जना केटा साथीहरु कार्ड छुवाउँदै लगेजहरु अप्ठ्यारो गरि छिराउँदै हुनुन्थ्यो । म अाफु भने छिर्नलाई हतार गरिनँ, एकछिन् उभिएँ । एकजना अग्लो कदवाला मान्छेलाई चिने झैँ लागेर मजैले हेरेँ तर साईड र पछाडिबाट मुस्किल भयो चिन्नलाई । अनि कार्ड छुवाउँदै पारि पुगेँ, हेराहेर भयो, खास अचम्मित भएनौँ, खुसिले उफ्रिएँ, दुवै हाँस्यौँ उहाँ त उनै कवि बोनम प्रताप मल्ल पो । दाह्रीलाई माया गर्नुभाको रैछ र चिन्न गार्हो भयो । हिजोको बेहुलाबेहुली चिनाउनुभयो, बधाई भनेँ । बिहेको ह्याङगिङ अलिलि जिवितै थियो सायद उहाँमा अनिन्द्रा, चिसोतातो । फिल्म हेर्न जाउँ, खास कर गरिन, उहाँ साथीहरुसङग हुनुन्थ्यो म एक्लै भए जसरि फ्याट्टै हिँड्न सजिलो थिएन अनि फेरि खल्लो हुँदै छुट्टियौँ ।
ढोकाबाटै हाम्रो असन्तुष्टि उछिट्टियो मुखबाट अरे! स्कृन त यस्तो पो? । उत्तम जी र मेरो अावाज फुत्कियो, दिपा बोलिन । फिल्म सुरु भैसकेको थियो, एकदमै असोचनिय, हल मल्टिस्क्रिन रहेछ । अगाडिपट्टि तीनवटा ठुलो र अलि पछि तीनवटा स-सानो । पस्नुबितिकै तिरिमिरि त भईन्छ नै हलभित्र, तर म त तित्तरबित्तर नै भएँ । सोचेको थिएँ एउटै पर्दामा ठुलो अाकारमै देखिएला, बरु तस्बिरहरु धुमिल अाउन सक्ला अफसोस यहाँ त बिल्कुल नसोचेको भैदियो । अगाडि पनि २ फिल्महरु हेरेको थिएँ, पर्दा एउटै थियो मजा लागेको थियो तर यो पालि त्यो भैदिएन । पछाडि बसेपछि सबै स्क्रिनमा अाँखा पुग्यो, जता भ्यायो उतै हेरियो । डाईलगहरु सुनियो पिक्चर राम्ररी देखिएन सुनेकै भरमा हाँसियो मध्यान्तर भैहाल्यो ।
१५ मिनेटको रेस्ट समय थियो, खाने, पिउने ट्वाईलेट जाने जे गरे पनि तेसपछि फेरि फिल्म सुरु हुनेछ । हामी सिधै चट्पटे मै पुग्यौँ, र अरु सबै पनि । बालकृष्ण दाजु लगायतका दाजुहरु ब्यस्त हुनुहुन्थ्यो अघिबाटै । दिपाले पनि प्लाष्टिकको पञ्जा लगाईवरि चट्पटे बनाउन थालिन्। म पनि मुरहि, चाउचाउको प्याकेट फुटाउँदै सहयोग गर्न थालेँ । तेसो त तेहाँ चट्पटे मात्रै थिएन, मासु चिउरा अनि क्यान बियर जुसहरु थियो । छिनमै झुरुप्प सबैले छोपिल्याउनुभयो । हुन पनि यै सटिक समयमा सबैले खाईसक्नु छ, ब्यापारीको हैरान पनि यस्तै बेला देख्नु छ । १५ मिनेटपछि अलि फार्से पाईयो सायद फिल्म सुरु भैसक्यो र सबै भित्र पसिसक्नुभयो । अब बल्ल हामी चट्पटे खान थाल्यौँ । दिपाले चाउचाउ धेरै हालेर स्पेशल बनाईन् हाम्रो लागि, पिरो पनि मिल्यो उत्तम जी लाई । सेसेहाङ दाजु र चाईनिज कान्छा दाजुले जुसहरु किनिदिनुभयो दिपा र मलाई । उत्तम जी क्यान बियर समातेर भन्दैहुनुन्थ्यो सातअोटा त भैसक्यो मिस । जति भए नि पचाउनुहुन्छ केरे, मैले ब्यङग्य गर्दिएँ, उहाँ रिसाउनुभएन, बरु हाँस्नुभयो । फिल्म हेर्नुथियो, र खानुपनि थियो, प्लाष्टिकमा चट्पटे हालेर जुस बोकेर हलभित्र छिर्यौँ, उत्तम जी हराउनुभयो पबित्रा थेवे जी जोडिनुभयो, सङगै बस्यौँ । बसाई र फिल्म हेराई अघिको भन्दा गतिलो थिएन । साईली को चर्चा र सकारात्मक प्रतिकृया अाएजसरि म सन्तुष्ट भैरहेको थिईँन । हलभित्रै बसेर दिक्दारी अनुभव भैरहेको थियो । खासमा म सुरुदेखि अन्तिमसम्म तनमनका साथ ‘साईली’ हेर्न चाहान्थेँ, यो सम्भव भएन, अाफैलाई धिक्कार्दै बसिरहेँ । फिल्म सकियो हुलहरुसङग ठेलमठेल गर्दै हलबाट बाहिरिएँ । ठ्याक्कै हाङखिम दाजुसङग भेट भयो, फिल्म कस्तो लाग्यो भन्नुहुन्थ्यो होला तर अगावै हलप्रतिको गुणासो पोखाएँ । किन हल त स्टान्डर हो नि नानी, दाजुले भन्नुभयो । तर मलाई ठिक लागेन दाजु , असन्तुष्टी जनाएँ । अायोजक टिमको उहाँ एक होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो ।र मनले जितेर खुलेरै भन्दिएँ । सबै दर्शकहरु मैजस्तो असन्तुष्टी हुनुभोहोला भन्दिन । मल्टिस्कृनमा मल्टि अानन्द पनि लिनुभयो होला त्यो अाफ्नो ठाउँमा रह्यो तर म भने असन्तुष्ट नै रहेँ । फिल्म भनेको फिल्म नै हो र फिल्म हेर्नलाई एउटै पर्दामा मात्रै अाकर्षक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको हो, यो सबैलाई नलाग्न सक्छ । जे होस् फिल्म सकियो ।
लाहुरेनी फूल एकै बसाइमा सिध्याए
चर्चाको शिखरमा लाहुरेनी फूल, आखिर के छत लाहुरेनी फूलभित्र ??
← चलचित्र पत्रकारिता राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार
निता ढुंगाना र आमेश अभिनित म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक →
मञ्जु भण्डारी मिस प्लस टु २०१८ का प्रतिस्पर्धीसँग